Vaovao - Fahombiazan'ny Tea Blossom
Ampifanaraho ny spleen sy ny vavony
Ny nectar voninkazo alemana dia misy vitamina C be dia be, ary ny voankazo sy voninkazo isan-karazany dia samy manana ny mampiavaka azy. Anisan'izany, mamy amin'ny tsiro ny voaloboka, dao milamina ny natiora, mamelona ny aty sy ny voa, mamelona ny qi sy ny ra, mampiroborobo ny tsiran'ny vatana, mampiroborobo ny fivalanana; Ny voan'ny papaya sy ny citrus dia mandevona ny sakafo ary manome tanjaka ny vavony, mampitombo ny fahazotoan-komana; ny voninkazo raozy dia manana tsiro mangidy, milay amin'ny natiora, manadio ny hafanana sy ny hamandoana, manala ny rivotra, mampiroborobo ny rà mandriaka, ary manapoizina Ny raozy dia manana tsiro mamy, natiora mafana, mampiroborobo ny qi ary manamaivana ny fahaketrahana, ary manala ny fanaintainana amin'ny rà. Ny vokatra isan-karazany dia samy hafa, izay samy misy ifandraisany amin'ny fifehezana ny qi amin'ny spleen sy ny vavony.
Ny dite nectar voninkazo dia afaka manasitrana sery. Izy io dia ny vitamina C miasa ao anaty dite. Ny vitamina C dia afaka manatsara ny tsimatimanota sy manamafy ny fahafahan'ny vatana manohitra aretina. Ny fisotroana dite misy voankazo iray kapoaka dia mitovy amin'ny fisotroana ranom-boankazo vaovao. Any Alemana dia matetika ny olona sasany dia mampiasa nectar voninkazo ho fomba fanampiana hanasitranana ireo aretina amin'ny zava-mahadomelina, amin'ny fiheverana fa afaka hanafohezana ny fizotran'ny aretina.
Ny nectar voninkazo dia vita amin'ny voankazo misy voninkazo sy dite, ary voalaza fa efa an-jatony taona maro izay. Amin'ny ankapobeny ny eropeana dia tia misotro kafe, fa ho an'ny Alemanina, ny dite voninkazo sy nectar dia ampahany manan-danja amin'ny sakafony. Tsy ny zokiolona alemà ihany no tia misotro azy, fa ny vehivavy alemà koa dia mihevitra an'ity dite ity ho vokatra tsara tsy maintsy ilaina.
Betsaka ny tsiro toy ny Paris Champs, olon-tiana tsy voafehy, nofinofy feno, hibiscus eny ambony rano, fomba eropeana, vehivavy tsara tarehy, ala mainty, fahatsapana fahavaratra, fitiavana blueberry, sns.
Ny dite voninkazo sy voankazo madio dia mizara ho tsiro 4: Paris Champs, Blue Melancholy, Lover tsy voafehy, Purple House Magic Medicine, samy manana ny tombony ananany eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana.
Ilay antsoina hoe dite vonin'ny voninkazo dia mifototra amin'ny voa voankazo sy voninkazo ary ravina fanafody sinoa ho fitaovana lehibe indrindra, izay mety amin'ny rhizome sy fanafody sinoa hafa. Izy io dia vaovao sy voajanahary, mahasalama ary tsy misy poizina ary vokany hafa.
Fotoana fandefasana: Sep-14-2020